Ithimba lethu ine iphothifoliyo olubanzi ziyahlukahluka kusuka izinkulungwane amaphrojekthi zendawo Chinese ezifana Beijing Jianwai ABU, Zhujiang eNewtown, iSikhumbuzo Nanjing Massacre kwabangcwele global ekwandiseni yonkana Asia & Pacific, Middle East nase-Europe.
Yaqalwa ngo-2002, Frontop isungule umnyango kwezilwandle ukuze sandise ezimakethe zomhlaba ngo-2010 Manje Frontop isibe omunye ekuholeni yezakhiwo izinkampani ngeso e China. Sine Amahhovisi evulekile e-Beijing, Shanghai, Guangzhou futhi Shenzhen. Ziphethe iqembu abanamakhono futhi abanolwazi 3D visualizers, abaculi kanye nabaqambi ingcaca, silwela ahlinzeke amaklayenti bethu okusezingeni eliphezulu service quality. Ngokuhlakulela isici esiphambene ngomsebenzi oku kahle, sesamukele ukwaneliseka ezikhulayo nedumela kusukela amaklayenti ethu.
Onguchwepheshe yezakhiwo inkonzo ngeso kuhlanganise ukuhumusha 3D lathumela, 3D izithombe, multi-media design ejensi, izinkampani ingcebo kanye consultants lathumela, Frontop uyohlale ukugcina ngcono ikhwalithi wethu nensizakalo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo kanye nezidingo ezivela kumakhasimende ethu.
Namuhla siye ngazuza ukwethenjwa ngokujulile kanye ubambiswano eside phakathi ezinye abaklami top nabaqambi kuhlanganise 10 Design, Gensler, Aedas, Benoy, DP Architects, BDP, South China University of Technology, Tongji University njll
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Umhlahlandlela , Hot Products , Ibalazwe , AMP Ucingo
Ukuhumusha Architectural, Interior Rendering , 3d Rendering Okubona , 3d Rendering , 3d Interior Rendering , China Interior Rendering ,
Cha 18. Agricultural Imishini Institute, Cha 261 Wushan Street, Tianhe District, Guangzhou, China.